မှန်​ခြင်း မှားခြင်း သီဝရီ ကျိုးပျက်​ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » မှန်​ခြင်း မှားခြင်း သီဝရီ ကျိုးပျက်​ခြင်း	6
မှန်​ခြင်း မှားခြင်း သီဝရီ ကျိုးပျက်​ခြင်း
Posted by naywoon ni on Apr 6, 2015 in Poetry |6comments
မှန်​ခြင်း မှားခြင်း သီဝရီ ကျိုးပျက်​ခြင်း တစ်​ဖက်​ကမှန်​ရင်​ တစ်​ဖက်​ကမှားရလိမ့်​မယ်​ဆိုတဲ့အ​တွေး
နှစ်​ဆယ်​ရာစုမှာ ထားခဲ့လိုက်​​တော့ ။
အမှန်​ အမှား ငြင်းခုံ​နေမှု​တွေ သုံးမ​နေနဲ့
အဘယ်​ အရာက လူအများကို အကျိုးပြုမလဲ
ဘယ်​ဟာက​တော့ လူအများကို ထိခိုက်​နစ်​နာ​စေလိမ့်​မလဲ
ငါတို့ တိုင်းတာ ဆုံးဖြတ်​ကြရ​အောင်​ ။
ငါတို့ ​ရှေ့ခရီးဆက်​ကြရ​အောင်​ ………. ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .သဂျီးကတော့ ငြင်းခုံခြင်း အနုပညာတဲ့။
.အလက်ဇင်းကတော့ ငြင်းခုံခြင်းကို အနုပညာ စာရင်းထဲသွင်းကိုမသွင်းဘူးတဲ့။
.အဲဒီ dog ဘာ sex လုပ်ကြမလဲ။
Alinn Z says: .ငြင်းနေစရာမလိုဘူးဟေ့
.ငြင်းခုံခြင်းဟာ အနုပညာကို ဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်
ငြင်းခုံခြင်းကြောင့် အနုပညာ ပျက်စီးယိုယွင်းသွားရတဲ့အချက် အချက်တစ်သိန်း ပြန် ထုတ်ပြမယ်
ဒီစာသားတွေကို ကျနော် သဘောတူတယ်
ကျနော်နဲ့ တယူတဆထဲလို့တောင် ပြောရမလိုပဲ။
အမှန်တရားဟာ တစ်ဖက်ထဲ တစ်ခုထဲ မဟုတ်တော့ဘူး
အမှန်တရား မျိုးစုံ ရှိတယ်။
အမှန်တရားဟာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ အထွေထွေအပြားပြားရှိတယ်
သူခိုးမှာတောင် ခိုးရခြင်း အကြောင်းရင်းခံ အမှန်တရားနဲ့
Mike says: .ဘာမှမီပြောခဲ့တော့ဝူး
ခင်ဇော် says: ပါးစပ်ပိတ်…. ခေါင်းငြိမ့်…ကြိတ်မှိတ်
ဖြည်း ဖြည်း ဖြည်း ဖြည်းလေးပြော
နား နား ပြီးပြောမောမယ်
တိုး တိုး တိုး တိုးလေးပြော
အဲဒီ သီချင်းကိုပဲ ဆိုချင်နေတယ်..
kai says: http://mandalaygazette.com/62285
မူလပို့စ်၏ အနှစ်ချုပ် (အချက်အလက် လို သွားလျှင်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါသည်)
1. အနိုင်ရမှု၊ ကျော်ကြားမှုဆီသို့ဦးတည်မသွားပဲ အဖြေတခုထွက်ရန်ရည်ရွယ်သော ဆွေးနွေးငြင်းခုန်မှု
2. ပညာလိုလား စိတ်နှလုံးသားနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း …………ဟု ဆိုပါမည်။
2. အမှားကို ၀န်ခံခြင်း၊ အမှန်ကို လက်ခံခြင်းသည် လူသား၏ကောင်းသော အသိသညာ၊သတိရှိသော အနုပညာပင်ဖြစ်လေသည်။
4.ပေါင်းစုစည်းရုံးခြင်းနှင့်ညီညွတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်း၍ မိတ်ဆွေတိုးစေနိုင်ပါသည်။
2. ခေါင်းဆောင်ဆိုသည်ကို မိမိကိုယ်နှိုက်က ပြန်သတ်မှတ်ရသည်မဟုတ်..။
1.ဒီမိုကရေစီတွင် လူအများစု၏ဆန္ဒအတိုင်းအနိုင်ပေးရန်ရှိရသော်ငြား လူနည်းစု၏ သဘောထားနှင့်မှတ်ချက်ကိုလည်းနှိပ်ကွပ်ပစ်ပယ်လိုက်ရသည်မဟုတ်ပါ။ လူတဦးခြင်းစီ၏ သဘောထားမှတ်ချက်မျှကိုပင်အသိအမှတ်ပြုရမည်။ မီဒီယာတွင်ဖေါ်ပြမှတ်တမ်းတင်ရသည်။
2. အနိုင်ရသူသည် မိတ်ဖက်တဖက်သား တည်ရှိဆွေးနွေးပေးမှုကြောင့်သာ လူထုအများစုမှ အနိုင်ပေးလိုက်သည်မဟုတ်ပါလား..။
naywoon ni says: ငြင်းခုံခြင်းက ကျန်​တဲ့ လူမျိုး​တွေအတွက်​​တော့ အနုပညာဖြစ်​ချင်​ဖြစ်​ပါလိမ့်​မယ်​ ။ ဗမာလူမျိုးအတွက်​​တော့ အနုပညာမဖြစ်​နိုင်​တာ အ​သေအချာ ။
မယုံရင်​ ဖွဘုတ်​ထဲကိုသွားကျိ ………
ငြင်းခုန်​ခြင်းကို အနုပညာလို့ ​ပြောရင်​ ဆဲဆိုခြင်းသည်​လည်း အနုပညာဖြစ်​​ပေလိမ့်​မယ်​ ။
မှတ်​ချက်​ ။ ဗမာလူမျိုးအတွက်